Iphi intsha yasemakhaya empini yomnotho – Bayede News
Iphi intsha yasemakhaya empini yomnotho
Kuleli sonto ngizothanda sike sibheke
Posted on 07/06/2019 27/06/2019 by Bayede-News
Intsha ibhiyozela ukuduva emakhaya ingaqashiwe ibe igogodile emikhakheni ethile
Kuleli sonto ngizothanda sike sibheke ubumqoka bokuzibandakanya kwabantu abasha kwezomnotho ikakhulukazi labo abavela ezindaweni zasemakhaya. Kuliqiniso elingephikwe ukuthi ufuduko lwabantu besuka ezindaweni ezibizwa ngokuthi ezasemakhaya beya emadolobheni amakhulu luyinto ekhona futhi nesazoqhubeka. Ucwaningo lweWorld Bank kanye nolweNhlangano Yezizwe i-United Nations (UN) luyakuveza ukuthi eminyakeni engama-50 kusuka manje, cishe abantu abangamaphesenti angama-60 bazobe sebehlala emadolobheni amakhulu emhlabeni jikelele.
Emazweni amakhulu afana neChina, sekubonakele ukwakhiwa kwamadolobha amakhulu amasha nofuduko olwenziwe nguHulumeni wakhona esusa abantu ezindaweni zasemakhaya cishe abangaphezulu kwezigidi ezingamakhulu angamakhulu ayisithupha zifudukele emadolobheni amakhulu cishe ngeminyaka engama-40 nje kuphela.
Izwe iNingizimu Afrika alehluke nhlobo kwamanye amazwe kulo mgqigqo. Nokho okumele masikuqonde namuhla kule ngosi wukuthi izindawo zasemakhaya akumele zakhele amanqe ngenxa yalolu fuduko. Abantu abahlala emakhaya kuzokhumbuleka ukuthi babhekene nengwadla ehambisana nokungabi bikho kwezinto ezenza impilo ibelula uma uqhathanisa nezindawo zasemadolobheni.
Ababuye babhekane nakho ukudonda kwabantu abazimisele ukufaka izimali ukuze kuthuthuke iminotho yakhona. Nokunye okuvame kakhulu ukungabi bikho kwengqalasizinda nezikhungo ezifanele nezisezingeni lokuthi kube khona ukukhula kwabantu abahlala khona ngezindlela ezahlukene.
Esijwini salezi zimo kunabantu abazithola ithemba labo liya ngokushabalala, okungabantu abasha nabasebancane ikakhulukazi abahlala ezindaweni zasemakhaya.
Imfundo yabo bayithola kanzinyana bathi futhi uma sebeyitholile kumele bahambe baye emadolobheni amakhulu ukuze basondelele izidingongqangi nezingqalasizinda ezifanele ukuze bazithuthukise. Okuye kwenzeke-ke emveni kwalokho yikho ukuthi abanye babo bahamba ungohamba bagcine sebakhe kulawa madolobha.
Ngokunjalo abanye bagcina sebethuthukile ngendlela yokuthi asibe sisaba bikho nesikhathi sokuthi nje bajeqeze ngasemuva ukuthi kwasalani. Lokhu kuyishwa elikhulu ngoba, akukho umuntu osuke efuna ukubhunguka ashiye ikhaya kumbe indawo azalelwa kuyona.
Okunye okusuka kushoda ukungabikho kombono ongenza iningi lalaba bantu abancwadiswa kulezi zindawo ukuthi babuyele emakhaya bezosiza ukwakha nokufukula abanye.
Abantu abasha balezi zindawo kuyabonakala ukuthi eyabo ingcindezi isaphindaphindekile njengoba kucaca ukuthi ezabo izidingo azikanakekelwa ngendlela. Uma singenza izibonelo zezinkampani zikaHulumeni ezifana nawoNational Youth Development Agency (NYDA), iSmall Enterprise Development Agency (SEDA), iNational Empowerment Fund (NEF), iSmall Enterprise Funding Agency (SEFA), i-Industrial Development Corporation (IDC), Ithala Development Corporation, i-Eastern Cape Development Corporation (ECDC) njalo njalo. Zonke lezi zizinda zimelwe ukulethela abantu baseNingizimu Afrika ngokungachemi imali ukuze kwakheke umnotho. Unyaka nonyaka kuhlale kukhona imali esuke ibekelwe ukuthi okungenani makuthuthuke iminotho ehambisana nazo lezi zindawo.
Kepha kuthi ngenxa yokungabinalo unakekelo olufanele eningi yale mali igcine isibuyele emuva kuHulumeni omkhulu ingasetshenziswanga. Kanjalo noHulumeni emazingeni ezifundazwe kuya koHulumeni Basemakhaya kuyaba nezinhlelo ezihambisana nokunyusela abantu basemakhaya indlela yokuphila, nalokho kuvame ukuphelela obala kungasabonakalanga ukuthi kugcine kwenziweni ngayo.
Ezinsukwini ezingengaki ezedlule sibonile uMnu uMaluleke onguMphathiswa Wezezibalo Nokuphathwa Kwezwe ekhipha umbiko wesigaba sokuqala sonyaka oshaqise kakhulu. Lapha uchaze ngokuthi umthamo nomkhiqizo womnotho jikelele waseNingizimu Afrika wehle ngaphansi ngisho kwezinombolo nesikalo ebesilindelekile esingama-3.2%.
Yisimo lesi esethusa kwedlulele ngaphezu kweminyaka elishumi edlule. Phakathi kwezigaba zomnotho ezehle ngokwesabekayo kube yilezi ezilandelayo: ezemikhiqizo ezehle ngama-8.8%, ezezimayini zona zehle ngama-10.8%, ezolimo zehla ngama-13.2%, ugesi wona wehla ngama-6.9%, ezokuthutha zona zehla ngama-4.4%, kanti ezohwebo zona zehle ngama-3.6% kwasekuthi isigaba sezokwakha sehla ngama-2.2%.
Okulethe ithemba kube imisebenzi kaHulumeni eyenyuke kancanyana ngama-1.2%, kwathi ezezimali zangconywana ngama-1.1%, kanti ukonga nakho kubengcono ngama-1.1%. Ezimbi ezithi uma umthamo womkhiqizo ungasimami esigabeni esilandelayo, lokho kuyosho ukuthi iNingizimu Afrika isingene esigabeni sokudonda komnotho nokungakhuli sanhlobo. Ukukubeka kucace nje, lokhu kusho ukwehluleka kukaHulumeni nokungakwazi ukukhulisa umnotho waseNingizimu Afrika.
Kusho futhi ukwehluleka kokuza namasu amasha azokwenza kukhule umnotho, kusho ukungabi nakho ukuzibophezela okuyikho ekulungiseni izimo ezenza kube nalobu bunzima. Akumangalisi ukuthi eminyangweni eminingi kaHulumeni kuzona zonke izifundazwe njalo ngokuphela konyaka wezimali ihlale ibuyiselwa emuva ngenxa yokuhluleka ukuyisebenzisa kumbe ukungazi ukuthi kumele kwenziweni ngemali. Siyokubheka lokhu ngelinye ilanga.
Kosekuphinde kwabhebhethekisa umlilo, yimibiko emisha esandukuphuma ekhomba ukuthi elinye lamabhange amakhulu eNingizimu Afrika okuyiStandard Bank lihlela ukudiliza abantu abaningi nokuvala amahhovisi cishe alikhulu ezweni lonke. Lesi sehlo nokwehla komnotho kuyimangalisa ngoba zolo lokhu kuzokhumbuleka ukuthi uMengameli Wezwe uMnu uCyril Ramaphosa ubebize izingqungquthela ezimbili ezinkulu lapho ebezokwazisa izwe ukuthi uzolwa kanjani nesimo sokungabi namisebenzi kwabantu baseNingizimu Afrika. Ubezokhuluma nangokunxenxa abatshali bezimali ukuthi bafake imali cishe eyizigidigidi ezilikhulu zamadola ase-USA, okungalinganiselwa kusigidintathu nesigamu ngokwamarandi.
Imigomo kaHulumeni ihleli obala okwezinqe zesele, kepha sekucacile manje ukuthi ukulotshwa kwayo emaphepheni nokwenziwayo akufani. Ukuzibandakanya nomnotho nasekuthuthukisweni kwawo sekumele kungabi manje yinto yomtakabani. Abantu basemakhaya, ikakhulukazi abantu abasha kumele banikezwe ithuba nabo ukuthi mababambe iqhaza ekuletheni izisombululo ezidingakalayo kwezomnotho wasemakhaya.
Posted in Ezomnotho